Tetikasa ASELSAN izay manohana ny talenta tetikasa ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena NATO | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Tetikasa ASELSAN's Support Talent Project ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena NATO
22 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Headline, fiarovana, TORKIA
tetik'asa talenta notohanan'i aselsan dia nampiasaina tamin'ny fampiharana ny OTAN
Ny tetik'asa 'Network Supported Talent' novokarin'ny ASELSAN dia nanaporofo ny saka-dia tamin'ny drill EURASIAN STAR'19 NATO.
Ny EURASIAN STAR (EAST) 2019 no nanatanterahana ny fandraisana anjaran'ny mpiasa 3 avy amin'ny foiben'ny sivifolo, andrim-pirenena ary fikambanana iraisam-pirenena tany Istanbul, miaraka amin'ny OTAN Command and Force Struktur.
Mba hamoronana toe-tsaina sy hisehoana ny zava-misy ankehitriny mandritra ny fampiharana EAST-2019, ny rindrambaiko Battalion Command Control System (TÜKKS / TACCIS) dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny Tetikasa Helped Ability (ADY).
Ao amin'ny Command Corps faha-3, izay foibem-panjakan'ny firenena maro, ny rindrambaiko TÜKKS / TACCIS amin'ny teny anglisy, miaraka amin'ny Status Map noforonina ho an'ny fenitra simban'ny NATO, faritra miasa amin'ny sarintany tarehimarika nalaina avy amin'ireo mpizara Map MAO, ny fanovana ny toe-javatra sy ny fepetra fanaraha-maso. fiasa toy ny fanaraha-maso, sariaka sy ny fahavalo Combat Arrangements (MIT) ary famindrana ny zava-misy ankehitriny amin'ny rafitra NATO Common Operating Picture (NCOP).
Tao anatin'ny tontolon'ny Tetikasa ADY, nanomboka ny 2019 septambra 30 ny fandinihana ny EAST-2019 tamin'ny fametrahana ny rindrambaiko TÜKKS / TACCIS. Ny fanohanan'ny mpiasa mazoto dia nomena ho an'ny fametrahana, ny mpampiofana ary ny fampiofanana mpampiasa, ny fidirana angona alohan'ny fampiharana sy ny fanatanterahana ny fampiharana. Nandritra izany fotoana izany, nalaina ny valin-teny avy amin'ireo mpampiofana, installer ary ireo mpampiasa mpampiasa ary natao ny asa ilaina mba hahavitana tanteraka ny fampiharana.
Vita soa aman-tsara ny fanatanjahan-tena EAST-2019 tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko TÜKKS / TACCIS hametrahana ny filàn'ny tafika tafika Tiorka folo volana mialoha ny fampitana ny tetik'asa ADY.
Dingana iray hafa amin'ny fizotran'ny andraikitra NATO 2021 (NRF21), izay zava-dehibe ho an'ny firenentsika dia vita tamin'ny fanatanterahana ny fampiharana EAST-2019.
Dingana fanamarinana ny OTAN
STEADFAST COBALT 2020 (STC2020) mankany amin'ny fanamarinana fanamarinana NATO tamin'ny volana martsa-Mey 020, CWIX-2020 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) ary STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 tamin'ny Novambra-Desambra 2020 JA2020) dia hitohy amin'ny drills.
Vokatry ny fahombiazana notanterahina tamin'ny fanatanjahan-tena dia voalaza ihany koa fa niara-nivory ireo mpiasa tao amin'ny Tetikasa ADY sy mpiara-miombon'antoka avy amin'ny orinasa samy hafa nandritra ny lanonana fankalazana tao amin'ny faritr'i İvedik Technopark miaraka amin'ny fandraisana anjara ny filohan'ny sekta Defense Defense Technologies (SST) ary ny filoha lefitra General Mustafa Kaval ary mpitantana.
Tetikasa tohanan'ny tamba-jotra (ADY) MIP Compliance
Tao anatin'ny faritry ny tetikasa natao ho an'ny Komitin'ny Tafika Tany, ny fotodrafitrasa IT dia noforonina tao anatin'ny 15 taona farany mifanaraka amin'ny fenitra NATO ary nomen'ny Havelsan ny fikojakojana azy ireo.
Ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa ireo sy ny fampiasana ny talenta tohanan'ny tambajotra dia tafiditra ao amin'ny tetikasan'ny Network assisted Talent (ADY). Ao anatin'ny tontolon'ny tetik'asa fanohanana ny fahaiza-manohana ny tambajotra (ADY), Havelsan dia hanohy ny hetsika amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa fampidirana ny Komitin'ny Tafika ny Tany izay natao nandritra ny taona 2001-2012, ary ny fifandraisan'ny rafitra vaovaon'ny Komitin'ny Tafika Tany amin'ny tontolo nasionaly sy iraisam-pirenena. (Loharano: DefenceTurk)
Ny fiantohana fiara sy ny fametrahana fiara manohana ny Helikopter dia natsangana tao Alanya Cable Car Construction
Ny tetik'asa fanentanana manohana ny fiaraha-miasan'ny EU ao amin'ny Train Station Sirkeci
Ny fametrahana ny lakandranon'i Helicopter dia nanomboka tamin'ny Uludağ (Photo Gallery)
3. Metro mankany amin'ny seranam-piaramanidina sy 3. fiaran-dalamby haingam-pandeha
Fitsipika vaovao avy amin'ny UKOME Fanohanana ny famokarana an-trano ho an'ny Yellow Taxis ara-barotra
Fanamboarana fantsom-bidy Nato Pipeline (BHRS III, Fasa (Atsinanana Atsinanana)…
Ny fantsakan-drano amin'ny alàlan'ny paositra NATO miaraka amin'ny rafi-jiro Bursaray Fahazavana 3 (Atsinanana Atsinanana) lalana…
Eurasia Crossing Project Manana tetikasa manerantany momba ny teknolojia mitarika mankany amin'ny tunneling
Famonjena ny familiana amin'ny sambotra teny amin'ny Tendrombohitra Yıldız
Fiofanana momba ny afo sy fanazaran-tena amin'ny orinasa Scissor Çankırı
Istanbul 5 dia hitsambikina mandritra ny taona maro
Sanliurfa Faritra 4 farany amin'ny Fitaterana
Tetikasan-dalamby High-Speed ​​Train Nevşehir
Saram-piaramanidina Samsun Sarp ao amin'ny tetezamita Çağ Atlatır
D Environment, Accident and Emergency Application "dia natao tao TÜDEMSAŞ
Nisy ny famonoana afo natao tao TÜVASAŞ
Pickpocket bolsera any Bursa